◙ Single women break tradition ◙ �Change mindset to end untouchability� ◙ School dropouts high in Banke ◙ World Environment Day marked ◙ Centuries old human remains found in Mustang caves ◙ CDCs effective in Sindhuli ◙ Remote schools get internet service ◙ Republic Day observed ◙ Water tanks getting dry ◙ Diarrhea patients rising up शनिवार	सूचनारसञ्चारको मूर्ति बनाउँदा रामकृष्ण भण्डारी राष्ट्रिय समाचार समिति २०६८ काठमाडौं स्वर्ण स्मारक निर्माण कार्यका लागि ढुङ्कामा स्वर्ण मूर्ति निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। यो मूर्ति निर्माण सूचना तथा सञ्चारको विषयमा बनाउनु पर्ने छ। धेरै मन पराउने हुनु पर्ने छ। मूर्ति राम्रो र नौलोका साथै यथार्थ किसिमको हुनुपर्ने छ। मलाई मूर्ति तयार गर्नु भनी रा.स.स. का कर्मचारीहरूका तर्फबाट मूर्ति बनाउने कार्यका लागि मूर्तिको डिजाइन -चित्र) आ�नै विचारमा बनाएर ल्याउनु भनेका थिए। मैले मूर्तिको स्केच तयार पारी लगेको थिएँ। रा.स.स.का कर्मचारीहरूलाई देखाएँ। उहाँहरूले मन पराउनुभयो।
राससको मूर्ति बनाउने सुरुको अवस्थामा विचार विमर्श गर्दा अनेक ध्यान दिनुपरेको थियो। सृजनाले भरिएको मूर्ति ढुङ्कामा कुँदेर निर्माण गर्नु पर्छ भन्ने लागेको थियो। देश र जनताको विषयमा सन्देश हुने मूर्तिको कलाकृति कुँद्नु पर्छ। नयाँ नौलो विचारको सोचबाट मैले यो अफिसमा राख्ने मूर्ति बनाउनु आ�नो कर्तव्य सम्झें। कस्तो मूर्ति बनाउनुपर्ला भनी मनमनै विचार विमर्श गरेँ। मूर्ति रिलिफमा बनाउने की फोर डाइमेसनको बनाउनु पर्छ। मूर्तिको आकार कस्तो बनाउने मूर्तिमा विचार के राख्दा राम्रो हुन्छ। मूर्तिको आकारलाई कसरी मिलाउने। ढुङ्कामा बनाएका मूर्तिमा विचारको प्रस्तुति कसरी गर्ने। मूर्तिलाई उत्कृष्ट र कलात्मक कसरी बनाउन सकिन्छ। मूर्तिमा चारै पाटाको आकार कस्तो हुन्छ ? अगाडि र पछाडिको पाटाको आकार कस्तो हुन्छ ? मूर्तिको शिरमा के आकार दिने, बीचमा कस्तो बनाउने, र -वेस्ट) तल्लो भागमा कस्तो बनाउने भनी राम्ररी विचार विमर्श गरी मूर्ति बनाउनु अघि नै निक्र्याैल गर्नुपर्ने हुन्छ। ढुङ्काको प्राकृतिक रङ्गको पनि निकै महत्त्व दर्साउनु पर्ने हुन्छ। मूर्तिमा समावेशी र महिलाको स्थानको पनि प्रतिनिधित्व गरिनु पर्छ। भनि मनमनै डिजाइनको आकार कोर्दा खेरी नै ध्यान दिनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय समाचार समितिको ५० वर्षको लोगोलाई सिरमाथि राखिएको छ। महिला र पुरुषको हातले सो लोगोलाई उठाएको छ। मच्छेगाउँको कालो ढुङ्कालाई मैले विचारबाट मूर्तिको अनुपात मिल्ने गरी मूर्ति बनाएको थिएँ। ढुङ्काको मूढालाई आकारमा परिणत गरेको थिए। मूर्ति बनाउँदै गर्दाको रूपमा पनि राससको पदाधिकारीहरूमा फोटो खिचेर देखाउने काम गरेको थिएँ। यसरी काम गर्दै गर्दाको फोटो रिकर्ड पनि उनीहरूको हेर्न पाएका थिए। कोरा ढुङ्का घरमा ल्याएपछि पनि फोटो खिचेर सुरुको ढुङ्का पनि देखाउने अवसर मिलेको थियो। यसरी मूर्ति बनाउँदा निकै समयको कार्य दैनिक रूपमा गरेको थिएँ। मूर्तिको तल्लो भागमा भएको बुट्टा कमलको पात थियो। कमलको पातमा गोलो आकारको डिस एन्टेना रहेको छ। कमलको पात माथि एन्टेना र त्यसैको आडबाटै नारी हात र पछाडिबाट पुरुष हातले ५० वर्षको लोगोलाई राम्ररी उचालेको छ। कमलको पातलाई सरस्वतीको प्रतीकको रूपमा, विद्याको प्रतीक बुद्धको आसनको रूप, हिलोमा पनि फुल्ने सुन्दरता, बुद्धले ७ पाइला हिडेको प्रतिविम्बको रूपमा कमलको महत्त्व त छँदैछ। शिक्षा र सञ्चारको प्रतीकको रूपमा कमलको पातलाई प्रतीक बनाएर मूर्तिमा सजाएको छु। यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समितिको काठमाडौंका लागि विशेष खालको मूर्ति बनाएर दिने कार्यमा म खटिरहेको थिएँ। विश्वभरिका गरिब जनताले सूचना र सञ्चार क्षेत्रलाई व्यापकता गरी सबैका माझ पुर्‍याउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। यो विचारको प्रमुखता मूर्तिमा मैले दर्साएको छु र सबैले यस क्षेत्रमा कार्य गरेको हुँदा त्यसको महत्त्वको मूर्तिलाई ढुङ्कामा बनाउने अवसर पनि यो समयले दिएको हो। भाद्र १ गते उद्घाटन गर्नका लागि मूर्तिलाई पिलरमै स्थापना गरी तयारी गर्नु पर्ने थियो। पिलरमा दही अपाको बुट्टेदार स्तम्भ बनाउने कार्यमा डकर्मी खोज्नको लागि मलाइ नै लगाएको हुँदा मैले त्यसको प्रबन्ध मिलाएको थिएँ। पिलरको आकार मूताविक दही अपा किनेर ल्याइको पिलरको स्तम्भलाई हात्ती पाइला र डण्डी पनि राखियो। ९-१० दिनमा स्तम्भ तयार गरियो। २०६८-५-१ मा बिहान ११ बजे सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीले रिबन काटेर मूर्तिको समुद्घाटन गरिएको थियो। मूर्ति रा.स.स.को बिल्डिङ्कको अगाडि मिलाएर अफिसतिर फर्काएर राखिएको छ। नौलो किसिमको आकार र विचारले भरिपूर्ण श्रमजीवी जनताको कार्यलाई उठाउने, उनीहरूको मिहिनतको विषयमा सोच विचारको मूर्ति बनाएर स्थापना गरिएको थियो। राम्रो कामलाई उत्साह दिनु पर्छ र नराम्रो कार्यको तारिफ गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश भएको मूर्तिमा विचार छ। आफूलाई बनाउने जिम्मा लगाइएको विशेष किसिमको विशेष मूर्तिलाई समयको अवधिभित्रै बनाएको थिए। मूर्तिलाई अहिलेको परिस्थितिको सम्झना गरी प्रगतिको बारेमा सार निचोडको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेको देख्न पाउँछौं। स्वर्ण बनाएर इतिहासको पहिचान हुने मूर्ति ऐतिहासिक कार्य सफलताको प्रमाणको रूपमा स्थापना भयो। Other Headlines ► . ► . .. ► सहज छैनन् अगाडिका बाटा जुनारबाबु बस्नेत ► सशक्त कविको अवशान जयदेव भट्टराई ► रोग निदानमा 'रिमोट सेन्सिङ' विष्णु पराजुली ► दुःख पाइयो, बढी जान्ने भएर लक्ष्मीधर गुरागाईं ► 'टिकीटाका'मा जमेको स्पेन प्रजित शाक्य ► . ► जङ्गल नमासिकनैपनि आम्दानी भक्तबहादुर थापा ► लौराले नापिन्छन् वर-वधु भउचप्रसाद यादव ► गर्न अझ धेरै बाँकी छ केशवराज खनाल ► फाटेको छाता उत्तमकुमार पराजुली ► पाँच वर्षपछि शिखरमा सन्तोष सुरेशकुमार यादव ► निवृत्त जीवन ► . . ► 'बुल्डोजर' को काम त भत्काउने मात्रै सीपी अर्याल ► 'माननीय' शब्द नसुनेकी सांसद लक्की चौधरी ► कलेज र विषय छनोट श्यामकुमार सिंह ► कविताबारे कवि र समालोचक जयदेब भट्टराई ► सुब्बिनी बज्यै चूडामणि खनाल ► किन असफल हुन्छन् 'सिनियर' खेलाडी प्रजित शाक्य ► धोनीको 'डे्रस सेन्स' ► . . ► भासिँदै छ काठमाडौँ उपत्यका ! राजु आचार्य ► चीन भ्रमणमा नेपाली युवाटोली दीपक सापकोटा Archives | Contact Details | Feedback | Home Gorkhapatra Sansthan - Dharmapath, Kathmandu, Nepal - Tel: 0977-1-4244437